ဆိုက်ကိုတိုးတက်ရေးပါတီ | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
ဒီ site နဲ့ကျွန်မလုပ်တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ထင်မြင်ချက်များအဖြစ်ငါဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါတယ် bug တွေ။
ကတင်ပြ ttravis 06: 05 - မွန်, 2017 / 20 / 12 အပေါ်
ကိုယ့်အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်း ဗီဒီယိုများ စာမျက်နှာအဖြစ်အတော်ကြာ မှတ်ချက်ကဏ္ဍ....... တွမ်
ကတင်ပြ ttravis 11: 05 - Sun က, 2017 / 13 / 32 အပေါ်
အစိတ်အပိုင်းများ, အစိတ်အပိုင်းများ, အစိတ်အပိုင်းများ
ရုံတစ်ခု update ကို။ ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအများကြီးတူအောင်မပြုစေခြင်းငှါနေစဉ်, ငါဆိုက်ဒေတာဘေ့စသို့အစိတ်အပိုင်းများကိုဝင်ရောက်အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ငါအီလက်ထရောနစ် form မှာဤအချက်အလက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်အဟောင်းလမ်းဝင်ရန်ရှိသည်။
သငျသညျ 1980 မတိုင်မီမော်တာကိုကြည့်ပါလျှင်ရရှိနိုင်လျှင်အခုအချိန်မှာ, သငျသညျ, ထိုမော်တာများအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစာရင်းကြည့်ပါ။ ဒါဟာအတိတ်နွေရာသီငါ 1980 ကနေလက်ရှိဖို့အားလုံးကို Evinrude / ဂျွန်ဆင် / OMC / BRP မော်တာဝင်ကြ၏။ ဒါကကြီးမားတဲ့အလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ငါကပြုမိတယ်။ ယခုငါ Sierra Catalog အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုဝင်ရောက်ငါနှင့်သူတို့အမေဇုံလင့်များအတူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်မော်တာမှသူတို့ကိုတက်ရည်ညွန်းပါလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်မှာငါပစ္စတင်ကွင်းဝင်များနှင့်သွားကြဖို့ 100 အကြောင်းပိုမိုစာမျက်နှာများရှိပါ၏! ငါရလဒ်ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ငါ referencing နှင့်အတူကူညီပေးဖို့တချို့ထုံးစံအစီအစဉ်များကိုရေးသားနေပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးတန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအစိတ်အပိုင်းများထဲသို့ဝင်ရရန်လိုအပ်သည်။
ငါကလူငါသေးထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြဘူးကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုတက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါ 2018 Sierra Catalog မှ link တစ်ခုထားပြုလေ၏။
ငါကို clean up ချင်အနည်းငယ်ကတခြား site ကိုကိစ္စများရှိသည်, ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာအဘို့ငါဒေတာထဲသို့ဝင်အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုရချင်တယ်။
ကတင်ပြ ttravis 09: 30 - Sun က, 2018 / 12 / 14 အပေါ်
ပိုများသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့် Motors က။
ငါအစိတ်အပိုင်းများနှင့်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်မော်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှည်လျားစာရင်းဖွင့်ကိုက်ညီ၏အဆုံးအနီးဖြစ်၏။ တစ်စုံတစ်ဦးက၎င်းတို့၏မော်တာရပ်လာခဲ့ရသောအခါ, ထိုမော်တာများအတွက်ကိုက်ညီအစိတ်အပိုင်းများများစာရင်းကိုပြသပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်လျှောက်လွှာကိုစားပွဲများတွင်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။ ဤသူသည်ငါစိတ်ကူးထက်ပိုကြီးတဲ့စီမံကိန်းကိုခဲ့ပေမယ့်ငါ entry ကို၏နောက်ဆုံးစာမျက်နှာအနည်းငယ်အတွင်းလက်ရှိဖြစ်၏။
ငါ posible သကဲ့သို့တိကျမှုဖြစ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်အချို့သောအမှားများဖြစ်ဖို့သေချာရှိပါသည်။ သင်မော်တာသို့မဟုတ်တညျ့ခံရဖို့လိုအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ပါဘူးသိသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာတွေ့ရလျှင်ငါ့ကိုဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ပို့စ်တင်နေဖြင့်သိစေပါ။
ငါအချို့သောအဟောင်းများမော်တာများအတွက်မရနိုင်တော့ပါ, အထူးသဖြင့်ဘာဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အများကြီးသင်ယူကြသည်။ ငါနောက်ကျောကိုသွားနဲ့ကျွန်မဒါသိသာမဟုတ်ဖြေရှင်းချက်ရှာတှေ့နိုငျပါလျှင်ကြည့်ဖို့အချို့သောသုတေသနလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မဆို input ကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များကြိုဆိုကြသည်နှင့်အခြားသူများအကျိုးခံစားရဖို့ကဒီမှာအသုံးပြုလိမ့်မည်။
ယခုငါတို့ဒီ site မျိုးစုံရှိသည်, ကျနော်တို့န်းကျင်နှင့်မည်မျှဘာသာစကားများကိုသူတို့အသုံးပြုနေသည်ထံမှရှိမည်မျှဧည့်သည်များမှာအံ့သြမိပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေသောမော်တာများအတွက်ဘုံချစ်ခြင်းမေတ္တာဟန်သကဲ့သို့ငါလူတိုင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်။
ငါသည်ဤ site ကိုတိုးတက်စေရန်မည်သို့ပိုပြီးအတွေးအခေါ်များရှိသည်နှင့်လာမည့်လအနည်းငယ်ကျော်ထဲသို့အားထုတ်မှုတွေအများကြီးတင်ထားတဲ့လိမ့်မည်။ ငါ site ကိုမှထပ်ထည့်ချင်တယ်အရာသုံးခုကျားကန်, မီးပွားပလပ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလက်စွဲဖြစ်ကြသည်။ ဤလူအများကြီးကိုရှာဖွေခံရဖို့ပုံရသည်ကြောင်းအရာဖြစ်ကြ၏။ ဖမ်းယူနားဆင်ပြန်စစ်ဆေးနေစောင့်ရှောက်နေပါ။
ကတင်ပြ ttravis 10: 25 - Thu, 2018 / 17 / 33 အပေါ်
ကိုယ့်ကို eBay ပေါ်မှာအစိတ်အပိုင်းအတွက်စျေးဝယ်ဖို့အသီးအသီးစိတျအပိုငျးအတှကျ option ကိုကဆက်ပြောသည်။
ငါအစိတ်အပိုင်းများတစ်ခုလုံးကိုစာရင်းမှတဆင့် သွား. ရလဒ်များကိုတက်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ query ကိုကဆက်ပြောသည်။ တခါတရံငါရလဒ်ကောင်းရဖို့ကွဲပြားခြားနားသောသော့ချက်စကားလုံးများနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနံပါတ်များကိုသုံးစွဲဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့တိုင်းပြည်အတွက်အမေဇုံ site ကိုမှအသုံးပြုသူများကိုယူမယ်လို့သို့မှသာဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်မကိုလည်းအမေဇုံမေးမြန်းချက်အခုမှ။
Amazon နဲ့ eBay ကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်တူညီတဲ့စိတျအပိုငျးမှာရှာဖွေနေငါတစ်ခါတစ်ရံနှစ်ခုအကြားကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်းကွာခြားချက်ကိုကြည့်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံအမေဇုံတစ်ခါတစ်ရံကို eBay ကအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရှိပြီး, အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌, သင်နှစ်ဦးစလုံးမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးစာချုပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ebay မှာစိတျအပိုငျးအများစုဟာတစ်ဦးလေလံပုံစံ၌နေကြသည်မဟုတ်။ သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းက "အခုဝယ်ပါ" စျေးနှုန်းအဖြစ်ပြသနှင့်မျှလေလံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာအားလုံးရှိ၏။
ebay မှာသမျှသောဤအပိုငျးအထိရှာဖွေနေစဉ်တွင်, ငါသည်အစိတျအပိုငျးရောင်းချနေလူအသငျသညျဝန်ဆောင်မှုကုန်သည်တွေနှင့်အဏ္ဏဝါစတိုးဆိုင်များအတွင်းရှိအစိတ်အပိုင်းများဌာနမှာရှာတွေ့မယ်လို့တူလူမျိုးဖြစ်ကြ၏သောအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ သူတို့ကပဲအင်တာနက်ပေါ်ရှိ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့နည်းလမ်းသစ်ရှာတွေ့နေကြပါတယ်။ ငါသည်လည်းပိုကောင်းကံ ebay မှာစိတျအပိုငျးကိုရှာဖွေရှားပါးနဲ့ Hard ရှာတွေ့ရှိပုံရသည်။
ကျွန်မသင်ယူရာတစ်ခုမှာသူကအသစ်သောအခြေအနေကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်ပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းပေါ်မှာထိုင်သော "ဟု New ဟောငျးစတော့အိတ်" ကိုဆိုလိုသည်သောဝေါဟာရကို "nos" ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးသဘောတူညီမှုသို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။
မျှော်လင့်, ဤအချိန်နောက်နှစ်အသုံးပြုပုံငါဂျွန်ဆင် / Evinrude / OMC / BRP သောဤ site ကိုပွားမည်မာကျူရီ / Yamaha နှင့်မော်တာ၏အခြားအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ကိုစတင်ပါ။
ကတင်ပြ ttravis 06: 12 - Wed, 2019 / 16 / 44 အပေါ်
တက်ကြွစွာ site ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။
ဒါဟာငါဆိုက်အတွက်ဘာမှမှတ်ချက်တိုးကဆိုပါတယ်င့်ကတည်းကခဏတစ်ဖူးရဲ့, ဒါပေမယ့်ငါအလုပ်များခဲ့ကြပြီမဟုတ်မဆိုလိုပါ။ ငါမကြာသေးမီကဂျွန်ဆင် / Evinrude မှတပါးအများအပြားအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်မီးပွားပလပ်ကဆက်ပြောသည်။ သည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ပလပ်ဖြစ်နိုင်ဟုကျနော်တို့ဂျွန်ဆင် / Evinrude နှင့်မာကျူရီ, Yamaha, ဟွန်ဒါ, နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးပေါ်ရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်နှင့်အတူပြည့်စုံအနီးတွင်ဖြစ်ကြောင်းသင်ပထမဦးဆုံးအရိပ်အမြွက်ပါလိမ့်မယ်။
အခုအချိန်မှာငါပန်ကာကိုထည့်သွင်းဖို့အဆင်သင့်ရတဲ့နေပါတယ်။ ငါ၏အမော်တာများအတွက်ပန်ကာဝယ်ယူသည့်အခါရှိသမျှတို့ကိုငါမရရှိနိုင်ခဲ့မှုအရာကိုမသိဘဲကောင်းသောလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ငါ့မော်တာအပေါ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအမြဲစိတ်ပျက်ရတယ်။ ငါ Voodoo သိပ္ပံကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ငါမီးပွားပလပ်ပြုတူသောအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဦးကိုအစားထိုးထွက်ကောက်နေပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။
ငါမြင်ကွင်းများဖှံ့ဖွိုးတိုးတနောက်ကွယ်မှတချို့လုပ်နေတာခဲ့ကြရတယ်။ // ..... SSL ကိုလုံခြုံရေးမရှိရင်လူတွေတူတစ်ခုခုဟုသတင်းစကားတစ်ခုရလိမ့်မည်ဟု "ဒီ site ကိုလုံခြုံသည်မဟုတ်,": အများစုကအထူးသ SSL ကိုလုံခြုံရေးများအပြင်, ဒါကြောင့်စာမကျြနှာမြား၏လိပ်စာအားလုံး https နဲ့စတင်သောအချက်ဖြစ်ပါသည် အရာစိတ်ဓာတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်သင့် browser ၏ address bar မှာပေါ်လာမယ့်အစိမ်းရောင်သော့ခလောက်ရှိသင့်ပါတယ်။ ဤသို့ပြုကတည်းက site ကိုအသွားအလာ, အထူးသဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသွားအလာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကလူ 2019 ၏မေလကနေဒီ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဘယ်မှာအောက်က image ကိုပြသသည်။ ကျနော်တို့ဗဟိုအာဖရိက မှလွဲ. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလွှမ်းခြုံရထင်ပါတယ်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပဲ့ချိတ်စက်တက် fix မှကြိုက်တယ်။ ငါသည်သူတို့၏နေအိမ်ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုဆိုက်ကိုတန်ဖိုးထားလူစုထဲကနားထောင်ကြလော့။